Izinyathelo Eziyisikhombisa Zendaba Ephelele | Martech Zone
Ukumaketha nokuthengisa okuningi kuthinta izethameli zakho ezingeni lomzwelo. Ukuxoxa izindaba kungumnyombo wokuchaza umkhiqizo noma insizakalo yakho. Ukuqongelela mayelana nezici nezinzuzo konke kuhle futhi kuhle, kepha ngaphandle kokuthi othile abone ukuthi uxazulula inkinga efana neyabo, amandla okuthi bakuthembe ngokwanele ukuthi ungaguqula kuyinto edutshulwayo ende.
Ukuxoxa izindaba kuyindlela yobuciko - noma ngabe kumane kwabiwa i-anecdote nezithameli zakho. Amandla okuhlela ifayili le- indaba eposini le-blog noma ividiyo emfushane idinga ezinye izisekelo. I- Inhlangano Yokumaketha Okuqukethwe uhlanganise le infographic ukukusiza ukuhlela indaba yakho elandelayo. Kwenze namuhla!
Kusuka esakhiweni nakulesi sakhiwo kuya kumaqhawe nabalingiswa, indaba yakho kumele ibe nayo yonke into uma izokwazi ukuxhumana nomfundi. Landela umhlahlandlela wethu empumelelweni yokuxoxa izindaba.
Tags: CMAinhlangano yokuthengisa okuqukethwengesakhiwoukuxoxa izindabaUkuxoxa ngezindaba